निषेधाज्ञामा कति बजेसम्म पसल खोल्न पाइन्छ ? यस्तो छ नयाँ नियम « Mero LifeStyle
निषेधाज्ञामा कति बजेसम्म पसल खोल्न पाइन्छ ? यस्तो छ नयाँ नियम
मेरो लाइफस्टाइल	|| 13 May, 2021
उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधको आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि वैशाख २२ गते पुनः एक साता थप गरिएको थियो ।
यसपालि निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरिद बिक्रीका लागि बिहान १० बजेसम्म खुला रहने छ । उक्त समयमा अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्टल स्टोर्स (खाद्य सामग्री मात्र बिक्री गर्न) खुला हुने छ । मानिसको भीडभाड हुने सबै गतिविधिमा रोक लगाइएको छ ।